ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိ | Pyithu Hluttaw
နေပြည်တော်- ဒီဇင်ဘာ ၂၀
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၊ ဖနွမ်းပင်မြို့သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလည်ပတ်ရန် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ ဒေသ စံတော်ချိန် ည ၁၁း၃၀ နာရီချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ သတင်း၊ မီဒီယာ နှင့် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Chheang Vun နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးချိုထွန်းအောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော သူရဦးအေးမြင့်၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးမောင်တိုး၊ ဦးတင်မောင်ဦး၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းသန်း နှင့် လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါခဲ့ကြသည်။ (သတင်းစဉ်)